သမိုင်း | Burma Muslim
ရိုဟင်ဂျာဆိုတာဝေသာလီခေတ်အချိန်ကာလအားဖြင့် ဗုဒ္ဓ မပွင့်မှီ ကတည်း က ရခိုင် ဒေသရဲ့ မူလ ဘူတ လူမျိုး Native of Arakan ဖြစ် တယ်
Posted by danyawadi on July 13, 2014 in Arakan History, သတင်းများ, Videos
ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာ ဝေသာလီခေတ် အချိန်ကာလ အားဖြင့် ဗုဒ္ဓ မပွင့်မှီကတည်းက ရခိုင်ဒေသရဲ့ မူလဘူတ လူမျိုး Native of Arakan ဖြစ်တယ်။ ရခိုင်မှာ ဘင်္ဂလီ ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဟိန္ဒူ ဘာသာကို ကိုးကွယ်တဲ့ လူမျိုးကိုပဲ ခေါ်ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာတွေက မဟာမေဒင် (မွတ်ဆလင်) ဖြစ်လို့ သူတို့ကို သမိုင်းတစ်လျှောက် ဘင်္ဂလီ လို့ အမည်ပေးခဲ့တာ မရှိဘူး။ ရိုဟင်ဂျာဟာ ရိုဟင်ဂျာ ပဲ ဖြစ်တယ်။ ဘင်္ဂလီ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ဟာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက မဟုတ်ဘူး၊ ရခိုင်ဒေသရဲ့ မူလဘူတ လူမျိုး နှစ်ပေါင်း ၄၀၀၀- ၅၀၀၀ ကပဲ ရှိတဲ့ လူမျိုး ဖြစ်တယ်။ သူတို့ကို မောင်းထုတ် သတ်ဖြတ်နေခြင်း ဟာ မတရားစွပ်စွဲ သမိုင်းလိမ်ပြီး လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်နေခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်-။
လင့်ကို နှိပ် ၍ ဗီဒီ ကို ကြည့်
ထိုင်းတစ်နိုင်ငံလုံးကို ရိုဟင်ဂျာ သမိုင်း ရှင်းပြပြီ။
Posted in: သမိုင်း
By burmamuslim on June 29, 2014 | Leaveacomment
(အလွန်လေးစားဂုဏ်ယူမိပါတယ် အမေရယ်..ကြီးမြတ်လွန်းတဲ့ စိတ်ဓါတ်ပါဘဲ) ချစ်မေမေဒေါ်စု ရဲ့သေတမ်းစာလေးကိုအားကြမိပါတယ်ခင်ဗျာ
အနိစ္စ သေဆုံးခြင်း၏ တရား။*
ကျွန်မ အသက် လူကြီးအရွယ်
*ကျွန်မ ကိုယ် ကျွန်မ
*အကယ်၍ ကျွန်မ သေလွန်တဲ့အခါ
ကျွန်မ ကိုချစ်သူ မချစ်သူ
အိုနာ သေခြင်း၏ မမြဲသောလမ်း။*
ကျွန်မ၏ အထွဋ္ဋ်မြတ်သော ဆံပင်
ကျွန်မ အသက်မဲ့ ခန္ဓာ ကို လှူပါတယ်။
အပင်တို့ အတွက် မြေသြဇာကြွေးပေးပါ။*
ကျွန်မ၏ နေအိမ် (သို့ ) ကျမ၏အကျဉ်းထောင်
ကျွန်မ၏ မြန်မာ အ၀တ်အစား
*ကျွန်မ၏ ကျန်ရစ်သော ဘဏ်ငွေသားအနည်းငယ်။
ကျွန်မ၏ ဈာပန စရိတ် နှင့်
ကျွန်မနှင့် ကွယ်လွန်သော ခင်ပွန်းအတွက်
ကျွန်မ ရသော ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုငွေသား
ကြား ကြားသမျှ အမျှ အမျှ အမျှ ယူတော်မူ။*
နားလည် ပါရမီဖြည့်ပေးသူ သားများ
*ဒီ သားများ အတွက်..
*အတူနေ မမဒေါ်ခင်ဝင်းနှင့် သမီးများ
အထူး မမေ့ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။*
သမားစိတ်ရင်း ကြောင့် ကျမ အသက်ရှည်..
ကျွန်မပြုသောကုသိုလ် အဖို့ ဘာဂ ဝေမျှပါတယ်။
*ကျွန်မ၏ တဦးတည်းသော ချစ်ရသောအကိုကြီး.
သွေးသားစပ်သူ ဦးအောင်ဆန်းဦး အတွက်..
ကျွန်မ အဖေ၏ ပန်းချီတချပ်..
သူမသေခင်..ခေါင်းရင်းမှာ ချိပ်ဖို့ ပေးအပ်ခဲ့တယ်။*
*အနှစ် ၂၀ သက်တမ်းရ.သက်တော်ရှည်
ကျွန်မ၏ တ၀မ်းကွဲမောင် ဒေါက်တာစိန်ဝင်း..
ကျွန်မရဲ့ အနှစ် (၂၀) အချုပ်ကာလအတွင်း
ကျွန်မ ရတဲ့ဆုတွေလက်ခံတဲ့အခါ စင်ပေါ်တက်
ကလိမ်ခြုံ နအဖ၏ ဂန္ဓ၀င်မိချောင်းမျက်ရည်။*
*ကျွန်မ မခေါ်ဘဲ အလည်တဲ့ဧည့်သည်.
ကျွန်မ အသက်ဘေးအတွက် သူ စိုးရိမ်တယ်။
ကျရာနေရာ ကူညီပါဝင် ဖြည့်ဆည်းပေးကြပါ။
ကျွန်မ အတွက်ထားတဲ့ ချစ်မေတ္တာ
ကျွန်မ လက်ထက်မှာ မရသေးခင်
ကျွန်မ ကိုယ်စား တာဝန်ဆက်ယူပေးနိုင်စေ.
ရိုဟင်ဂျာမရှိဟုသမိုင်းအမှန်ကိုဖျောက်ပြီး၊ရေးသော ငါ့စကား၊ နွားရ ရခိုင် သမိုင်း
By burmamuslim on April 13, 2014 | Leaveacomment
ရခိုင်တွေ သမိုင်း အမှန်ကို ဖျောက်ပြီး ငါ့စကား၊နွားရ ဟူသော သမိုင်း ကို အခု လိုထောက် ပြခြင်း. – ၁
ရခိုင်တွေ သမိုင်း အမှန်ကို ဖျောက်ပြီး ငါ့စကား၊နွားရ ဟူသော သမိုင်း ကို အခု လိုထောက် ပြခြင်း. – ၂
ရခိုင်တွေ သမိုင်း အမှန်ကို ဖျောက်ပြီး ငါ့စကား၊နွားရ ဟူသော သမိုင်း ကို အခု လိုထောက် ပြခြင်း. – ၃
ရိုဟင်ဂျာမရှိဟု၊ရခိုင်ရေးသော ဗလောင်ဗလဲ သမိုင်း
By burmamuslim on February 11, 2014 | Leaveacomment
ဂျာမဏီ သမ္မတ Joachim Gauck ၏ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဘွဲ့နှင်းသဘင် ခမ်းမ၌ပြောကြားသော မိန့်ခွန်းမှ ကောက်နှုတ်ချက် (၁)
Posted in: သတင်း, သမိုင်း, အထူး
1978 ဟင်္သာ စီ မံ ချက် မှာ ဗိုလ်နေ ဝင်း က အ ကုန် စီ စစ် ပြီး လက် ခံ
By burmamuslim on November 22, 2013 | Leaveacomment
By burmamuslim on November 12, 2013 | Leaveacomment
Posted in: မှတ်စု, သမိုင်း, အထူး, ဆောင်းပါး
” ငါပြောသမျှ ငါ့အကြောင်း “..ဒေါက်တာသန်းထွန်း။
၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်ဆိုရင် ငါ့အသက်၇၇ ပြည့်လို့ရ၈ဖြစ်တော့မယ်။ ဆိုလိုတာက သေခါနီးပြီပေါ့။ ငါ့လမ်းငါထွင်ပြီး ငါလုပ်ချင်တာလုပ်ခဲ့ တယ်။ အောင်မြင်သင့် သလောက် အောင်မြင်တယ် ။ရှုံးတာတွေလည်း အများကြီးပေါ့။ ဒါကိုနောင် လာနောင်သား တွေသိရင် ကောင်းတာပေါ့။ ပြီးပြီးသားကို တိုတိုရှင်းရှင်း ပြောတယ်။ ရည်ရွယ်ချက်က လူငယ်တွေ ဟိုလိုဒီလို တွေးမနေရအောင် ကွက်လပ်ဖြည့်ပေးတာပဲ။ ထပ်ပြီးကွက်လပ် မဖြစ်ရအောင် ဒီအတိုင်း မှတ်တမ်းအဖြစ် ကျန်စေချင်တယ်။
ငါရေးတာမှာ ကြွားတာ၊ မှားတာ။ မမှန်တာ မပါဘူး။
(B.A.Hons:), MA, Ph.D, D.Lit,(London)
အငြိမ်းစားပါမောက္ခ၊သမိုင်းဌာန၊ မန္တလေး တက္ကသိုလ်။
အဖွဲ့ ဝင်၊မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်းကော်မရှင်။
ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါမောက္ခ၊မြန်မာနိုင်ငံ ရှေးဟောင်းသုတေသန ပညာဌာန။
ဂုဏ်ထူးဆောင် ပါမောက္ခ၊သမိုင်းဌာန၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်။
” ငါပြောသမျှ ငါ့အကြောင်း ” စာအုပ်အမှာမှ
Posted in: သမိုင်း, အထူး, ဆောင်းပါး
မြန်မာအစ – တကောင်း ကနှင့် မြန်မာအစ ကျောက်ဆည်က ၏ ဝိရောဓိ။
( ခ ) မြန်မာအစ-တကောင်းက နှင့် မြန်မာအစ ကျောက်ဆည်က ၏ ဝိရောဓိ။
မှတ်ချက်။ ။ ဖတ်ရှုလေ့လာမိသော စာအုပ်များထဲမှ ဝါဒတူရာ စာပိုဒ်များကို မိတ်ဆွေများ အဆင်ပြေပြေ လေ့လာနိုင်စေရန် စုစည်းထားသည်။ မည်သည့် စာအုပ်ထဲ မှ ဖြစ်သည်ကိုလည်း အသိပေးထားသည်။
မိမိ ဘာလဲ၊ မိမိလူမျိုးအစဉ်အလာ မည်သို့ရှိခဲ့လဲ ၊မိမိ၏အမိမြေသည် မည်သို့သောအခက်အခဲများကိုကျော်ဖြတ်လာရသလဲ ၊မြန်မာဟူသောခေါင်းစဉ်အောက် နားလည် မှုများ ကို မည်မျှအချိန်ပေး တည်ဆောက်ခဲ့ရသလဲ ၊တချိန်က မည်သို့သော ပြင်မရသည့် အမှားများ ကျုးလွန်ခဲ့ကြသလဲ ၊ထိုအမှားများထဲမှ မည်သည်ကို သင်ပုန်းချေ၍ မည်သည်ကို အတုယူရမလဲ၊ လူမျိုးခြား များကအမေးရှိလာသော် အပြောသွက်သွက် အပြောမခက်ဖို့ မြန်မာ့သမိုင်း ( တိုင်းရင်းသားများအပါအဝင်) ကိုလေ့လာ ထားသင့်ပါသည်။
မြန်မာအစ-တကောင်းက ဟူသောယူဆချက်မှာ မြန်မာတို့သည် ကျောက်ချောခတ်နှင့် ကြေးခေတ်မှ သံခေတ်သို့ အကူးအပြောင်းကာလ ကတည်းက ရောက်ရှိနေ ထိုင်မြို့ပြထူထောင်ခဲ့သော လူမျိုးဖြစ်သည် ဟူသောအယူအဆဖြစ်သည်။
မြန်မာအစကျောက်ဆည်က ဟူသောအယူအဆမှာကား မြန်မာတို့သည် အေဒီ ၉ ရာစုကျော်တွင်း ခေတ်လယ်ပဒေသရာဇ်စနစ် ထွန်းကားနေပြီဖြစ်သော အချိန်ကာလ မှသာ ရောက်ရှိနေထိုင်သူများဖြစ်သည်ဟူသောအယူအဆဖြစ်သည်။
ကိုလိုနီ အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့နှင့် တကောင်းပေါ်အငြိုး။
မြန်မာအစ တကောင်းကဟူသောစကားမှ တိုက်ရိုက်ပေါ်ထွက်လာသော အဓိပ္ပါယ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိမြန်မာတို့သည် တကောင်းအရပ်တွင်စတင် မြို့ရွာ တည်ထောင်၊ ထီးနန်းစိုက်ထူ သည်ဟူသောအနက်ကိုရ၏။ ပထဝီအနေအထားအရလည်း တရုတ်နှင့် အိန္ဒိယ ကုန်သွယ်ရာ ပိုးလမ်းမကြီး နှင့်နီးစပ်၏။တကောင်းတွင် ယနေ့တိုင်တူးဖော်ဆဲ အုတ်ဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသော မြို့ရိုးဟောင်းကြီးများကိုတွေ့ရ၏ ။ မြို့ရိုးကိုပတ်လျက် ဧရာဝတီမြစ်မှ ရေသွင်းယူထားသော ကျုံး လည်း ရှိပါသည်။ထို့ကြောင့်မြန်မာရာဇဝင်များ တွင်မှတ်တမ်း တင်ထားသော တကောင်းမြို့ကို ဘီစီ ၆၀၀ ကျော်ကတည်ထောင်ခဲ့သည်ဆိုလျှင် ချိယန်တို့သည် တရုတ်တို့၏ အနှောက်အယှက်ကြောင့် ယူနန်တောင်တန်းများမှတဆင့် တာပိန်မြစ်ကြောင်း အတိုင်း ထိုမှ ရွှေလီ ထို့နောက်တွင် မေခ စသဖြင့် ရေကြောင်း အကူအညီဖြင့် အလျင်အမြန် ရောက်လာခဲ့လျှင် တကောင်းမြို့ကိုတည်ထောင်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ထိုမှ ဧရာဝတီမြစ် ကိုစုန်ပြီး အနောက်ဘက်ရှိမူးမြစ် ချင်းတွင်းမြစ်ဝှမ်းနှင် အနောက် ရိုးမတောင်တန်း များဆီသို့၎င်း၊ အရှေ့ဘက် မြစ်ငယ်၊ဇော်ဂျီ၊စမုံ၊စစ်တောင်းစသောမြစ်ဝှမ်းများနှင့် အရှေ့ဘက် ရှမ်းရိုးမတောင်တန်းများဆီ သို့၎င်း၊ကူးစက်ပျံ့နှံ့ သွားသည်ဟု ရှေးရာဇဝင်သုတေသီတို့က ယူဆကြသည်။ဤဆို့ဆိုလျှင် မြန်မာ့မြေအတွင်း နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော် အခြေချ နေထိုင်ပြီးသော လူမျိုး၏ အစဉ်အလာမှာ လွန်စွာကြီးမားပေလိမ့်မည်။ဤဇာတိမာန်ကား ကြံဆဖိနှိပ်ထားမှသာ မြန်မာတို့အပေါ် ကျွန်သက်ရှည်စေ နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် မြန်မာ့သမိုင်း၊ မြန်မာ့ရာဇဝင်ကို မြန်မာတို့ ဖတ်ရှုယင်းဖြင့် မြန်မာတို့သည် မိမိတို့ရာဇဝင်ကို မိမိတို့အထင်သေးအမြင်သေးဖြစ်လာရုံမျှမက ဇာတိသွေး၊ဇာတိမာန်လည်း ပျက်သုန်းစေရန် အကြံဖြင့် တကောင်း အပေါ်ရွာငယ်ဇနပုဒ်အဖြစ်ဖန်တီးခြင်း နှင့် တကောင်းအား ပုဂံ ဘုရင်အနော်ရထာ ၏ ခံတပ်ငယ်လေးအသွင်ဖန်တီးလိုက်ခြင်း စသဖြင့် မြန်မာတို့၏ အဦးအမွန်ဒေသအား ဗြိတိသျှ အစိုးရမှ ဖျောက်ဖျက်ခဲ့ပါသည်။ထို့ပြင် တကောင်း၊ ဆင်ညှပ်ကုန်း ၊ ကြံညှပ်စသောဒေသများသည် အရှင်နှစ်ပါး သူ့လက်သို့ကျရောက်ပြီးသည့်တိုင် နယ်ချဲ့ တို့အား အပြင်းအထန် ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့သော ဝန်းသိုစော် ဘွားကြီး ဦးအောင်မြတ်နှင့် မင်းသားမောင်မှတ် တို့ကို အား ပေးကူညီခဲ့သောကြောင့် ကြံညှပ်သူကြီး ဦးဖိုးရ၊ မြတောင်ဝန် နှင့် မလယ်ဝန်တို့ကို အငြိုးထားခဲ့ သည်။ဗြိတိသျှစစ်ဗိုလ် တစ်ယောက်ကို အသေတိုက်ခဲ့သော ဤဒေသကြီးကို ဗြိတိသျှတို့မှ လွန်စွာအငြိုးထားခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ကုန်းဘောင်ခေတ်တွင် တကောင်း၊ မြတောင်၊ ကြံညှပ် အစရှိသောမြို့ရွာများသည် သီးခြား မြို့စား၊မင်းသား ၊မင်းသမီး များအုပ်ချုပ်၍ လေးမြို့ဝန်၊ ငါးမြို့ဝန်စသဖြင့် ခန့်ထားအုပ် ချုပ်သော မြို့ကြီးများဖြစ်သည်။သို့သော် ဤဒေသများကို ရွာသူကြီးအုပ်ချုပ်သော ဇနပုဒ်အဖြစ် သို့ ဗြိတိသျှတို့က လျော့ချခဲ့သည်။၎င်း တို့ကမျက်နှာသာမပေး ၍ ဒေသခံတို့ ကစွန့်ခွာကြရာ တကောင်းမှာ အိမ်ခြေ ၃၀ ခန့်သာရှိသော ရွာပျက်ကြီးအဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားတော့ သည်။အနီးအနားမှာလည်းခြုံနွယ်များပိတ်ဖုံးလျက် လက်ကျန်ရွာ သားတို့မှာလည်း ငါး လိပ်ရှာယင်း အသက်မွေးခဲ့ရလေတော့သည်။ထို့ပြင်ရွာနီးပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လည်းမသင့်မြတ်အောင် ထပ်မံ၍ ဖန်တီးခဲ့ကြပြန်လေ သည်။ တကောင်းပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး တောဖုံး၍ ရွာသိမ် ရွာငယ်ဘဝရောက်သော်မှ ဗြိတိသျှတို့သည် ရန်ကုန် အသိုင်းအဝိုင်းကိုခေါ်ပြရာ လူနေမှု အဆင့်ကိုကြည့်၍ ရန်ကုန်ပညာတတ် အသိုင်းအဝိုင်းမှ တကောင်း ဟူသည် ပုဂံလက်အောက်ခံ ခံတပ်ငယ်တစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်း လက်ခံလာကြသည်။သို့နှင့် တကောင်းမြို့ကြီးကား ရာဇဝင် ပုံပြင် အဆင့်သို့ ရောက်ခဲ့ရတော့သည်။
အတွေးအယူအဆ ၊အထောက်အထား ၊အားသာချက်များနှင့် မြန်မာအစ ကျောက်ဆည် ။
မြန်မာတို့သည် ခရစ်နှစ် ၈၀၀ ကျော် လောက်က ယူနန်နယ် တောင်ပိုင်းမှ ကုန်းလမ်းအတိုင်းဆင်းလာကြကာ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း ထိုမှတဆင့် ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်း သို့ ဖြတ်လာကြကာ ရွာငံသို့ရောက်သော် နတ်တောင်ထိပ်ဖျားမှမြင်းများနှင့် ဆင်းသက်လာပြီးလျှင် ကျောက်ဆည်လွင်ပြင်ကို တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်၍ စိုက်ပျိုးနေထိုင်ပြီး လူဦးရေ ပိုလျှံသော အခါ တစ်နိုင်ငံလုံးသို့ ယပ်တောင်သဖွယ် ဖြန့်ကျက် နေထိုင်သူများဟုအဓိပ္ပါယ် ရ၏။ထိုသို့ ဆိုလျှင် မြန်မာဟူသောလူမျိုးသည် ထိုကာလ၌အုပ် ချုပ်နေသော နယ်ချဲ့အစိုးရကဲ့သို့ပင် နယ်ပယ်ချဲ့ထွင်လာယင်း နယ်မြေသိမ်းပိုက်သူဟု ယူဆရန်ရှိနေသည်။ မြန်မာအစ ကျောက်ဆည်ကဟူသောအယူအဆအရ တကောင်းနန်းတော်သည် ဒဏ္ဍာရီဘဝ သို့လျော့ကျသွားရုံမျှမက မြန်မာ့ ရှေးခေတ်သမိုင်း သက်တမ်း တိုလွန်းသွား၍ မြန်မာတို့သည်လည်း သမိုင်းစာအုပ်အပြင်ဖက်သို့ ထွက်ပေး ရသည့်အဖြစ်မျိုး ဆိုက်ရောက်သွားတော့သည်။ သိုးမွေး ဆိတ်မွေး ၍အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းပြုရသော ကိုယ်ပိုင်စာပေ မရှိသော တိဗက်- မြန်မာ ( ချိယန် ၊ မာန် ) လူရိုင်းအဆင့်သာရှိသူများ ဖြစ်သွားရတော့သည်။ ထို့ပြင် အေဒီ – (အေဒီ -၈၃၂) ၉ ရာစုဝန်းကျင်တွင် တရုတ်ပြည်တောင်ပိုင်း တွင်ကြီးစိုးနေသော နန်းစော တို့ ( ရှမ်းမဟုတ် ) တို့မှ ပျုတို့ပိုင်စိုးရာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကိုတိုက်ခိုက်ရာ တဖြေးဖြေး နှင့်ကျောက်ဆည် လွင်ပြင်သို့ တိုင် ရောက်ရှိတိုက်ခိုက်ရာမှ ထိုဒေသရှိ ပျူမင်းနေပြည် ပျက်စီးကာ ပျုနိုင်ငံ ပျူလူမျိုးတို့မှာ ပျက်သုန်းတိမ်ကော၍ ပျောက်ဆုံးခဲ့ရကြောင်း တဖန် နောက်သုံးနှစ်ကြာလျင် အောက်ဗမာ ပြည်ရှိ မွန်တို့၏ မြို့တော်ဟုယူဆရသော မိချန်ကို နန်စောတို့ တိုက်ခိုက်ကြရာမှ မွန်လူမျိုးများ ပျက်သုန်းတိမ်ကော ခဲ့ရကြောင်းဖြင့် လစ်လပ်သွားသော ကျောက်ဆည်ဒေသ ကို မြန်မာတို့ဝင်ရောက် နေရာယူ လာသည်ဟူ၏။ဤသို့ဖြင့် ပျူရော မွန်ရောကင်းမဲ့ပြီး ပျူနိုင်ငံနေရာတွင် နှစ်ထပ်ကွန်း ဗလာဖြစ်နေချိန်တွင် မာန် ( မြန်မာ ) တို့က အေဒီ ၈၃၅ တွင် ယူနန်နယ်တောင်ပိုင်း အစွန်မှ ထွက်ပြေးလာပြီးပျူနိုင်ငံအတွင်းသို့အခြေချနေထိုင်လာကြသည်။မြန်မာတို့က ခါးလည်မှဖြတ်၍ဝင်ရောက်လာသောအခါ ကျောက်ဆည်မြောက်ပိုင်းတွင်မွန် အုပ်စုကြီးတစ်ခုကျန်ခဲ့ ရာမှ မြန်မာတို့သည် မွန်တို့ ထံမှအတတ်ပညာအမျိုးမျိုးကို လေလာသင်ယူခဲ့ကြသည်။မြန်မာတို့၏ မူရင်းပြောစကားတွင်ဝေါဟာရ အသစ်များထည့်သွင်းခြင်း၊ မြန်မာစကား၊ မွန်စကားကို ရေးတတ်အောင်သင်ပေးခြင်း၊ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဟောပြောခြင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးပညာကို လမ်းပြပေးခြင်းစသည်ဖြင့် မွန်တို့နှင့်အတူနေထိုင်၍ လေ့လာသင်ယူခဲ့ပါသည်။စကော ကရင်နှင့် ပလောင်တို့ ထူထောင်သွားသော လယ်၊ဆည်နှင့် မြောင်း တွေကို ဆက်ခံပြီး စိုက်ပျိုးရေးပညာ ပါတတ်လာခဲ့ပါသည်။ ချိယန် ( မန် ) အ ဖြစ် နေစဉ်တုန်းကတိရိစ္ဆာန်များသာမွေးမြူခဲ့သော်လည်း အရှေ့ဘက်မှလာ၍ စပါးစိုက်နည်းပညာယူဆောင်လာသူများ ကို မင်းပြုစေခဲ့သည်ဟုလည်းဆို၏။မြန်မာဖြစ်လာမည့်မန်တို့သည် မြောက်ဖက်ရှိတောင်ပြုန်း (၁) ခရိုင်နှင့် အနောက်တောင်ဖက် မိုင် ၁၀၀ ကျော်အကွာအဝေးရှိ မင်းဘူး (၆) ခရိုင်ကို သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။ လူဦးရေတိုးပွားလို့ ယပ်တောင်သဖွယ်ဖြန့်ထွက်သွားပုံမှာ ဧရာဝတီမြစ်ကိုဆင်းပြီး ၊ပုံတောင်နဲ့ ချင်းတောင်ကိုသွားရာမှ နောက်ဆုံး ရခိုင်စစ်တွေကိုရောက်ရှိပါတယ်။ ဒုတိယအခြေစိုက်ရာနေရာမှာ ဧရာဝတီ အနောက်ဘက်ကမ်းရှိ ခုခေတ်မင်းဘူး ခရိုင်၊ စလင်းစကုနယ် ခြောက်ခရိုင်ဖြစ်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ တောင်တွင်(တောင်တွင်းကြီး) မြစ်အောက်တွင်ပြည် ၊ချင်းတွင်းကိုဆန်ပြီး မူးမြစ်အထက် မုဆိုးဖိုဝ်( ရွှေဘို)၊ထိပေသျှင် ( ဒီဗယင်း) နှင့်က္လိယ်တူ ( မြေဒူး) ဟူသော နယ်မြေများအထိ ပျံ့နှံ့ နေထိုင်ကြသည်ဟူ၏။ထို့နောက်မှ အေဒီ ၈၄၅တွင် ပျဉ်ပြားမင်းမှပုဂံမင်းဆက်ကိုထူထောင်ကာ အေဒီ ၁၀၄၄တွင်နန်းတက်သော အနော်ရထာ ဘုရင်မှ ပထမမြန်မာ နိုင်ငံတော်ကြီးကို စတင်တည်ထောင်၍ ပုဂံခေတ်ကိုအစပျိုးခဲ့သည်ဟူ၏။
ယခုဆောင်းပါးကိုမရေးခင်ကရှေ့တွင် ဤဆောင်းပါးနှင့် အဆက်စပ်ရှိသောဆောင်းပါး နှစ်ပုဒ်တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ပထမဆောင်းပါးတွင် မြန်မာ့သမိုင်းကို လူမျိုးခြား ဘာသာခြားတို့ မှ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ သြဇာလွှမ်းမိုးထားပုံကိုလည်းကောင်း၊ ဒုတိယဆောင်းပါးတွင် မြန်မာ့သမိုင်းအား မည်သို့မည်ပုံ မည်သည့်အကြောင်းကြောင့် လွှမ်းမိုးထားသည် ကိုလည်းကောင်း အယူအဆတူရာများစုစည်း ရေးသားခဲ့ပါသည်။ယခုဆောင်းပါးတွင်တော့ ရှေးမြို့ဟောင်း တကောင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိ မည်လောဟု မျှော်လင့်ချက်နှင့် တကောင်းအယူအဆအား အားပျော့မှေးမှိန်အောင် ဖန်တီးထားသော ကျောက်ဆည်အယူ အဆ၏ အထောက်အထား နှင့် ဆက်စပ်ယူပုံ ကိုတင်ပြချင်မိပါ သည်။ သို့သော် ဤ မြန်မာအစ ကျောက်ဆည်က ဟူသော အယူအဆကား မြန်မာ့သမိုင်းပညာရှင်များအကြား ဆယ်စုနှစ်များစွာ အငြင်းပွားနေ ရခြင်းများစွာကိုလေ့လာတွေ့ရှိရသဖြင့် နောင်ဆောင်းပါးများတွင် အငြင်းပွားစရာအချက်များကို ဆန့်ကျင်ဘက်အုပ် စုမှ ဖြေရှင်းသွား သည်များကိုတင်ပြသွား ပါမည်။မြန်မာ အစ ကျောက်ဆည်က ဟူသော အယူအဆမှာ ၁၉၃၆ ခုနှစ် တွင် လု့စ်အဆိုမှ စ၍ နောက်ဆုံး ဒေါက်တာသန်းထွန်း ၏၂၀၀၅ ခုနှစ်ထုတ် မြန်မာဆိုတာ အထိ တည်မြဲနေရခြင်းမှာ တကောင်းမြို့ဟောင်းတွင် အထောက်အထားခိုင်လုံသော ပျူခေတ်ဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှုပစ္စည်း များ တွေ့ ရှိမှုနည်းပါးခြင်း ၊ အကယ်၍တကောင်းမြို့ပြသာ ရှိခဲ့ပါလျှင်လည်း ဗိဿနိုး၊သရေခတ္တရာ ၊ဟန်လင်း မြို့ပြကြီးများကဲ့သို့ တိုင်းသူပြည်သားများမှ စွန့်ခွာသွားခြင်းမရှိပဲ ခေတ်အဆက်ဆက် လူနေထိုင်မှုရှိရာ တကောင်းမြို့ပြ၏ ကနဦး ယဉ်ကျေးမှု ပစ္စည်းများနှင့် နောက် ပိုင်း ခေတ်အဆက်ဆက် ယဉ်ကျေးမှု ပစ္စည်းများ ရောထွေးသွားနိုင်ခြင်း ကြောင့် သာသနာအစည်ပင်ဆုံး ယဉ်ကျေးမှုအကျယ်ပြန့် ဆုံးဖြစ်ခဲ့သော ပုဂံခေတ် အထောက်အထားဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ အတွေ့များနေခြင်း ၊ကျောက်ဆည်လွင်ပြင်တဝိုက်တွင် ပုဂံခေတ်သက္ကရာဇ်ပါ ကျောက်စာများသာ တွေ့ရခြင်း ကျောက်ဆည်ဒေသရှိရွာတို့ ၏ အမည်အချို့ကို မြန်မာနိုင်ငံ အခြား ဒေသများတွင် မှည့်ထားလေ့ရှိခြင်း ၊ပျူစာ မြန်မာစာလုံးများကို အဓိပ္ပါယ် ဆက်စပ်နိုင်မှုအားနည်းနေခြင်း စသည်ဖြင့် တရုတ်ရာဇဝင် မန်ရှုမှတ်တမ်းပါ အချက်အလက်များပုဂံ မြစေတီ ရှိ အမည် မသိကျောက်စာ အထောက်အထားများကိုရနိုင်သလောက်ဆက်စပ်သုံးသပ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤသည်တွင် စာရေးသူ စိတ်ဝင်စားမိသည်မှာ နန်းစောတို့ လာရောက်တိုက်ခိုက်သည့် ကျောက်ဆည်လွင်ပြင်တဝိုက်ရှိ ပျူလူမျိုးများ မည်သို့ ပျောက်ဆုံးသွားပါသနည်း ဟုဖြစ်သည်။အေဒီ ၁ ရာစု ၏ဗိဿနိုး ပြည်ကြီးပျက်သည်မှ ၎င်းတို့နှင့်ခေတ်ပြိုင် သရေခတ္တရာ ပြည်ကြီးစည်ပင် စဉ် တလျောက်လုံး နေထိုင်ခဲ့လာသည်ကား ပျူတို့ပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် အေဒီ ၃-၄ ရာစုမှ ၉ ရာစုတိုင်စည်ပင်လာခဲ့သော ဟန်လင်း မြို့ပြသည်လည်း ပျူတို့ ဌာနီပင်ဖြစ်သည်။ ဤသို့ရာစုနှစ်ပေါင်း များစွာ ဒီမြေပေါ်တွင်ပင် အခြေချ နေထိုင်လာသော ပျူတို့ကို နန်စော တရုတ်တို့ မကြွင်းမချန်အကုန်ဖမ်းသွားသတ်သွားသည်လားမတွေးတတ်ပါ။ သို့တည်းမဟုတ် သရေခတ္တရာ သို့ ခိုလှုံသွားကြသည်လား။ ထိုပျူတို့သည် ပျူအမျိုးနွယ်ဖြစ်သော်လည်းသရေခတ္တရာ သားတော့ဟုတ်ဟန်မတူပါ။ သို့ဆိုလျှင် ကျောက်ဆည်လွင်ပြင် အနီးအနားတွင် ပျူတို့နေထိုင်ရာ နန်စော တရုတ်တို့ ဖျက်၍ပျက်ရသည့် မည်သည့် ပျူမြို့ပြရှိသေးသနည်း ။ ထို့ပြင်ဟန်လင်းမြို့ပြ သည်ပြာပူမိုးရွာ ၍ပျက် သည်ကို လေ့လာမိခြင်း သုတေသနအထောက်အထားမှ နောက်တိုး ယဉ်ကျေးမှုအထောက်အထားမတွေ့ရဟုဆိုပြီး မီးလောင်ပျက်စီး သွားသည်ဟု အတည်ပြု ထားခြင်း ကြောင့် အေဒီ ၉ ရာစုက နန်စော တရုတ်တို့ မည်သည့် ပျူနိုင်ငံကို လာရောက်ဖျက်စီးသနည်း။သရေခတ္တရာ သည်လည်း အေဒီ ဆယ်ရာစုထိတိုင် စည်ပင် ဝပြော၍ အေဒီ ၁၀၄၄ တွင်မင်းတက်သော အနော်ရထာမင်းစောနှင့် အဆက်အဆံ ရှိသည့်အုတ်ခွက်အထောက် အထားများ ကသက်သေခံနေ သည်မဟုတ်ပါလား။ စာရေးသူ အနေအထား ကလည်း လေ့လာဆဲ မို့ မသိရှိနိုင်သေးပါ။ ယခု လောလောလတ်လတ် သိရှိသမျှအား မှတ်မိနိုင်အောင် မှတ်စုထုတ်၍ မှတ်ယင်း စိတ်ဝင်စားသူတို့ အလွယ်တကူလေ့လာနိုင်ရန် တင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ထို့ပြင် စာရေးသူသည် မိမိ လေ့လာသလိုပင် အခြေခံမှစ၍ စာဖတ်သူများ အပေါ်တဆင့်ခြင်း ဖြည်းဖြည်းသာတင်ပြသွားမည်ဟုလည်း စိတ်ကူးထားပါသည်။ ဤကျောက်ဆည် အယူအဆ မှာရှုပ်ထွေးလျက် ရှိသောကြောင့် လေ့လာရာ တွင် ကျောက် ဆည်အယူအဆကိုလက်ခံသည့် ဖက်မှ စာပေများကိုလည်းကောင်း ထို့နောက် ကျောက်ဆည်အယူအဆ ကို ငြင်းချက်ထုတ် ထားသော စာပေများကို လည်းကောင်း လက်လှမ်းမီရာ စာပေများစွာ တို့အား နှိုင်းယှဉ်လေ့လာရသည်မို့ ရေးစရာ ကိစ္စတွေများပြားလွန်းလှပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အယူအဆရယ် ငြင်း ချက်ထုတ်ပုံရယ် တို့ကို တစ်ခုခြင်း အဆင်ပြေသလို အကိုးအကားများနှင့်အသေးစိတ် ဆက်လက်ရေးသားသွားပါမည်။ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ စာရေးသူ ရေးသားခဲ့သော ဆောင်းပါး သုံးပုဒ်ဖြစ်သော
—ကုလားဖြူနယ်ချဲ့ဝါဒီ တို့ ဖန်တီး ခဲ့သော သမိုင်းကြောင်းအမွေဆိုး
–ရွှေနန်းဆီသို့ ( ၁ )
( က )တရုတ်မှတ်တမ်း မှီငြမ်းထားလွန်းတဲ့ ရွှေ တို့၏မြန်မာအစ-ကျောက်ဆည်က ဟူသော အထောက်အထား ကို အသက်သွင်းပုံ။
( ခ ) မြန်မာအစ-တကောင်းက နှင့် မြန်မာအစ ကျောက်ဆည်က ၏ ဝိရောဓိ
တို့တွင်ကိုးကားထားသောစာအုပ်များမှာ ပုံနှိပ်သက်တမ်းအရသော်လည်းကောင်း၊ စာတမ်းဖတ်ချိန်အရ သော်လည်းကောင်း သက္ကရာဇ်အားဖြင့် အစောဆုံး ၁၉၅၆ မှ နောက်အကျဆုံး ၂၀၀၅ ခုနှစ်အတွင်းမှ ကောက်ချက်များသာဖြစ်ပါသည်။ လက်ရှိအချိန်ကာလ နှင့်ဆိုလျှင် ခုနနှစ်ကျော် ကွာဟသွားပြီဖြစ်၍ သုတေသန အထောက် အထားသစ်များ ၊မထင်မှတ်ပဲ တိမ်မြှုပ်ပျောက်ကွယ်နေသော ကွင်းဆက်များ ၊ ပညာရှင်အချို့၏ အယူအဆ ပြောင်းလဲခြင်းများ ရှိနေပါသေးသဖြင့် နောင်ရေးမည့် ဆောင်းပါးတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြသွားပါမည်။
_ _ သျှင် လေညင်း (၂၀၊၂၊၂၀၁၃)
မှန်နန်း မဟာရာဇဝင်တော်ကြီး (၂၀၀၃)
G H Luce -Economic of the Early Burma/Old Kyauke-se and coming Burm (၁၉၅၇)
ဗိုလ်မှူး- ဘရှင်။ အနော်ရထာအရင်က မြန်မာနိုင်ငံ (၁၉၇၅) ဒုတိယအကြိမ်
ဒေါက်တာသန်းထွန်း – မြန်မာဆိုတာ (၂၀၀၄)
ဦးဖိုးလတ် – မြန်မာအစ (၁၉၇၃)
ဒေါက်တာထင်အောင်- Burmese History Before 1287
ပုဂံမပျက်မီကမြန်မာ့သမိုင်း(အောင်သန်း မန္တလေး -ဘာသာပြန်) (၁၉၇၃)
ချစ်စံဝင်း- မြန်မာ့မြို့ဟောင်းတကောင်းရုပ်ပုံလွှာ (၂၀၀၄)
ဦးသန်းဆွေ – တကောင်းမြိုဟောင်း လေ့လာတွေ့ရှိချက် (၁၉၆၆)
ညိုမြ – ကုန်းဘောင်ရှာပုံတော် (၂၀၀၃)
Photo Detail ; Tagoung ShweSiGone
Photo credit; not Dr. Nyi Win